प्रियंका चोपडाको सम्पत्ति उनका श्रीमानकोभन्दा बढी ! - Aarthiknews
प्रियंका चोपडाको सम्पत्ति उनका श्रीमानकोभन्दा बढी !
एजेन्सी । वर्ष बिजनेस टुडेको एक रिपोर्ट अनुसार भारतीय नायिका प्रियंका चोपडाको सम्पत्ति निक जोनासको भन्दा ठूलो नेट वर्थ रहेको देखाएको छ । प्रियंकाको कुल सम्पत्ति करिब २८ मिलियन डलर अर्थात २०० करोड रुपैयाँ रहेको अनुमान गरिएको छ । निक कमाईमा आफ्नी नयाँ पत्नीको भन्दा धेरै पछाडि छैनन्, यद्यपि, निकको पनि अनुमानित २५ मिलियन अर्थात १७१ करोड रुपैयाँको रहेको छ ।
प्रियंकाको कमाई असंख्य बलिउड फिल्महरू, हलिउड फिल्महरूबाट र अमेरिकी टेलिभिजन शो क्वान्टीबाट आउने गरेको छ । उनको निजी उत्पादन कम्पनी पर्पल पेबल पिक्चर्सबाट पनि आउँछ। उनले ट्याग हेयर, नोकिया, पेप्सी जस्ता शीर्ष कम्पनीको ब्रान्ड एम्बेसडरको रूपमा पनि काम गरेकी छिन्।
निकको कमाई लगभग एक गायकको रूप आफ्नो अत्यन्त सफल क्यारियर मानेका छन । उनका दुबै भाइहरुको ब्यान्डको हिस्साको रूपमा र आफ्नै एकल क्यारियरको कमाइबाट आउने गरेको छ । उनीसँग धेरै टेलिभिजन कार्यक्रम र एक फिल्मबाट पनि कमाई आएको छ।